WhatsApp inoedza nzira nyowani dzekukurumidza kuwana zvitambi | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 06/05/2021 23:59 | IPhone maapplication, Noticias
Mameseji masevhisi ave zuva redu zuva nezuva. Ndichiri teregiramu Inoenderera ichikwira mukuzivikanwa kwemabasa ayo nekukurumidza kuvhurwa kwayo kwevhidhiyo mafoni mune yakachena nyanzvi maitiro, WhatsApp iri kuenderera nekuvandudza mabasa mumabhagi ayo. Uye ndezvekuti mabetas eeshanduro nyowani dzeWhatsApp anoratidzira mazhinji emabasa ayo anogona kunge achizoonekwa mune ramangwana, kunyangwe chiri chokwadi kuti mazhinji anoramba ari munzira. Mune beta yekupedzisira tinogona kuona mazano ekunamira, chimiro che kurumidza kuwana zvimiti zvine chekuita neshoko, senge muIOS iyo inobatanidza mazwi nema emojis pane iyo keyboard.
WhatsApp yaigona kukumbira kunamira kuburikidza nemashoko
Basa racho rakabhabhatidzwa se sticker mazano zvese mukati uye pawebhusaiti yakatsaurirwa kuongorora aya mabheji WABetaInfo. Iyo iripo mamiriro eiri basa ndeyekuti iri pasi pekuvandudzwa uye inosvika kune ese maApp uye Android sezvingaonekwa mune kodhi yemhando dzakasiyana dzeanoshanda masisitimu ari kubvunzwa.
Izwi rekutambira mazwi eWhatsApp rave kupera. Unoda here kuramba uchishandisa iyi app?
Mazano ekunamira anoshanda nenzira yakafanana nema emojis anoenderana nemazwi anoshanda pane iyo iOS keyboard. Stickers ane metadata mukati iyo inobvumira kuenzaniswa nemazwi. Nzira yakapusa yekuinzwisisa iri kuburikidza nemuenzaniso. Fungidzira kuti tine zvitambi zvinotenderera pakunzwa kwe "kusuruvara." Iyo nguva yatinonyora izwi rekuti "kusuruvara", iyo icon yezvinamira zviri kurudyi ichachinja kuti tikwanise kuwana zvakananga zvitambi zvinoenderana neshoko ratakanyora, mune iyi nyaya "kusuruvara" uye chete izvo zvinoenderana nekutsvaga ndiko kucharatidzwa.
Tinogona kutarisa mashandiro ayo muchidimbu muvhidhiyo pamusoro pemitsara iyi. Nekudaro pane muganho: Parizvino zvitupa zvechitatu-bato hazvishande nechishandiso ichi. Ndokunge, vese avo vatinogadzira kunze kweWhatsApp ecosystem havaenderane nebasa iri, zvirinani mukati meiyo beta yatiri kutaura nezvayo. Nekudaro, zvemukati zvinyorwa zveapp zvinosimbisa kuti ivo vari kushanda kuti vakwanise kuzvibatanidza nekukurumidza sezvinobvira kuIOS uye Android uye kunyangwe kugona kuyananisa, gare gare, emojis nezvimiti, kutora danho kumberi nenzira iyi yekugovana izvi zvirimo mukutaura kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » WhatsApp inoedza nzira nyowani dzekukurumidza kuwana zvitambi
Unboxing vhidhiyo yeAirPods 3 dombo vasina ivo vari pamusika